ဝါးခယ်မ : သူတို.ပြောတဲ့ ဦးရွှေမန်း နဲ. သူ.သားများအကြောင်း - ၁
From The Union Daily
ခုလို ဖြစ်ရပ်တွေ မပေါ်ပေါက်ခင် လပိုင်း အလိုမှာ ပြည်သူ.အာဏာ ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်က ဦးရွှေမန်း ရဲ့ ခရိုနီ အင်ပါယာကြီး ပြိုကွဲတော့မှာလား ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ဆက်တည်း မှာပဲ လက်ရှိ ဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်းမှာ ဦးရွှေမန်း ရဲ.သားတွေ နဲ.ပတ်သက်တဲ့ ဖော်ထုတ်ရေးသားမှုတွေ On Line မှာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ် ။
အချို.က အသစ်ရေးသားလာကြတာ ဖြစ်သလို အချို.ကတော. အရင် ရေးသားပြီးသားတွေကို ပြန်လည် ဖော်ပြလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီင်္ထဲက ရရှိသမျှ အချို. ကို မူရင်းအတိုင်း ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါမယ် ( မိမိတို.အနေနဲ. မူရင်းအတိုင်းသာ ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး ဒါတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ မူရင်းရေးသားသူတွေရဲ. အာဘော် နဲ. ဖော်ထုတ်ရေးသားမှုများသာဖြစ်ကြောင်း နဲ. မိမိတို.အနေနဲ. တစ်စုံတစ်ရာ ဝေဖန်ရေးသားမှုမျိုး ပြု လုပ်ရန်မရှိပါကြောင်းလည်း အသိပေးအပ်ပါတယ် ) ။
သူ.ရဲ. Profile ကိုဖော်ပြရေးသားထားမှု တစ်ခုမှာတော. ခုလိုရေးသားထားတာတွေ.ရပါတယ် ။
၁။ အမည် - သူရဦးရွှေမန်း
၃။ လူမျိုး/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၇/သကန(နိုင်) ၀၀၇၉၅၂
၅။ မွေးသက္ကရာဇ် - ၁၁-၇-၁၉၄၇
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ကညွတ်ကွင်း၊ ဖြူးမြို့နယ်
၇။ ပညာအရည်အချင်း - B.Sc(D.S.A),H.G.P
၈။ ယခင်အလုပ်အကိုင် - နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ (အငြိမ်းစား) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် - ဦးဖိုးဖေ (ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ဌေးရီ၊ မှီခို
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ခင်လေးသက်၊ အငြိမ်းစား (အထက်တန်းပြ ဆရာမ)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် - (၁) ဦးအောင်သက်မန်း၊ စီးပွားရေး (၂) ဦးတိုးနိုင်မန်း၊ စီးပွားရေး
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(အေ/၃)၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ရာဇသင်္ဂဟလမ်း၊နေပြည်တော်
၁၄။ ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ - ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
၁၅။ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်
၁၆။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ။
၁၇။ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက် - သမ္မတဖြစ်ရန်။
၁၈။ လတ်တလောအာရုံစိုက်ခံရမှု - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တပူးတွဲတွဲတွေ့မြင်ရခြင်း။
အခြား တစ်ဦးကတော. ခုလို မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပြန်ပါတယ် ။
၁၉၉၅ တွင် အမှတ် ၆ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲရေးမှူးအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပြီး နှစ် ၅၀မြောက် ရွှေရတုတပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားတွင် စစ်ရေးပြမှူးကြီးအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။ထို့နောက် ၁၉၉၇တွင် အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ် တိုင်းမှူးအဖြစ်ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။၄င်းနောက် အတွင်းရေးမှူး(၂) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ၄င်းဧ။်နေရာတွင် တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ)ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။၁၉၉၈တွင် ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်၊၂၀၀၃တွင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊၂၀၀၅တွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဆင့်ထိ တိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ မြန်မာ့ တပ်မတော်တွင် ရာထူးနှင့် ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း/ ရေ/ လေရုံး) ရာထူးကို ၂၀၀၂ခုနှစ်မှ၂၀၁၀အထိ ရယူခဲ့သူဖြစ်သည်။၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စစ်ဘက်ရာထူးများမှအနားယူခဲ့ရပြီး နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝင်နှင့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်းရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုနာယကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် ။
သူနဲ.သူ.သားတွေအကြောင်း ဆောင်းပါးတွေ ရေးသားကြရာမှာတော.
မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သြဇာအရှိန်အဝါ မသုံးခဲ့ကြောင်း၊ အချိန်မရွေးအစစ်ခံနိုင်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ တဲ့ ရွှေမန်း နဲ့ သူရဲ့သားများအကြောင်း ကို အမြစ်တူးခြင်း ....(၁) ဆိုတဲ့ Burmar Pyi Thar ဆိုသူရေးသားတဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ခုမှာ ခုလိုတွေရေးသားထားတာကို တွေ.ရပါတယ်။
ဦးရွှေမန်း ၏ မိခင်နာရေးတွင် ဆွေမျိုးများ နှင်. အတူ တွေ.ရစဉ်
Ref ; bagyithet.blogspot.com , NSA (RT Democratic Wave) & mmopenletters.blogspot.com
Posted by ဇာမဏီ at 9:43 AM